Chinyakare Gazpacho - Recipe yeThermomix | ThermoRecipes
Soupu3 maminitsi4 vanhu
Zvino chii chinotanga kupisaIni ndinoita iyo gazpacho vhiki yega yega. Ini nemurume wangu tinozvida chaizvo.
Ndisati ndave neThermomix® ndaive nehusimbe hwekuzviita, nekuti haina kuyera zvigadzirwa uye haina kugara yakandikwana zvakanaka. Zvino, zvinopesana, zvinogara zvichindikwana zvakakwana uye munguva pfupi zvaitwa.
Kutonhoresa uye nechimwe chando, ndiyo nzira yatinoifarira zvakanyanya. Tinogona zvakare kunakidzwa chero shanduro dzayo izvo zvinotibatsira kuti tiwane kudya kwakasiyana siyana.
2 Maitiro ekuwana iwo akakwana mameseji
Saka zviri nyore kuita kuti iwe usazove nungo kuzvigadzirira.
Kubika nguva: 3M
Nguva yakazara: 3M
1 k yematomatisi akatsvuka uye akaibva (kana 1 chirongo chikuru chematomatisi akasikwa)
80 g yemhiripiri yakasvibirira
40 g hanyanisi
80-100 g yemagaka akachekwa (ini ndinowedzera 80 g)
25 g yevhiniga
50 g yemhandara yemafuta emuorivhi
200g mvura inotonhora
Isu tinoisa miriwo yese, vhiniga uye munyu mugirazi. Isu tinoronga Masekonzi mashanu, nekumhanya 30.
Tinowedzera mazaya echando uye chirongwa Maminitsi maviri, nekukurumidza 2.
Tinowedzera mafuta, toiisa panzvimbo ye girazi rakavharwa uye rinopa turbo kukurudzira kwechipiri.
Tinowedzera mvura uye tinosanganisa Masekonzi mashanu, nekumhanya 5.
Shandira uchiperekedzwa nezvidimbu zvechingwa chakakangwa uye mimwe miriwo yatakashandisa yakatemwa kuita zvidimbu zvidiki.
Kana iwe ukashandisa echinyakare Thermomix® mamodheru uye iwe uchida kudzivirira kupwanya, iwe unogona kuisa bhasiketi pamusoro pechivharo.
Maitiro ekuwana iwo akakwana mameseji
Kana iwe uchida kuwana iwo akakwana mameseji eako gazpacho iwe unogona kushandisa aya maviri manomano:
Kuti a yakawanda mvura gazpacho: Iwe unongofanirwa kuwedzera mashoma echando cubes uye kana ikanyungudika inoita kuti iwedzere kuva mvura.
Kuti a mukobvu gazpacho: Iwe unogona kuwedzera 150 g yechingwa kubva zuva rapfuura. Ipinze iyo nhanho 1 pamwe chete nemiriwo kuti uwedzere muviri kune yako inotonhora muto.
Mamwe mashoko - 9 exotic gazpachos yezhizha rino
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Zvinokanganisa, Nyore, Zhizha mabikirwo, Soup uye mafuta, Vegan, Muriwo
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Soup uye mafuta » Gazpacho
Ndinoda kuziva kuti ingani magirazi egazpacho anobuda nekuti kumba kwedu tiri vaviri. Inochengeta zvakanaka here kana ikachengetwa usiku hwese?
Ndatenda nemareseji ako.
Mhoro Manu, pamba chete ini nemurume wangu tinozvitora uye chokwadi ndechekuti mumazuva matatu takatora. Ini ndinoichengetera mu blender jar ine screw screw (kubva kuMercadona) uye inoramba iri mufiriji kwemazuva angangoita mana. Chokwadi ndechekuti kana kuchipisa, hakugare kwenguva refu kwatiri.
Pili diaz akadaro
Ini ndoda recipe yaElena, haagadzi gazpacho kuNorth zvakadaro, asi zvese zvichauya. Mubvunzo Ungagare kwenguva yakareba sei mufiriji? Shuwiro yakanakisa
Pindura Pili Diaz
Mhoro Pili, ndinokuudza nzira kuna Manu, inogara munzvimbo yakakwana kwemazuva mana mufiriji, yakavharwa zvakanaka. Asi, chokwadi ndechekuti kumba kunotora nguva shoma shoma nekuti tinovatora ipapo. Shuwiro yakanakisa.
Ndichitora mukana weiyo gazpacho recipe ini ndaida kukubvunza iwe kana iwe uchikwanisa kutikurudzira nzira yekugadzira vise cream, iyo yandakaedza pane imwe nguva uye ndinogara ndichida kuzviita kumba ...
Mhoro Rocio. Ndiri kutsvagawo imwe yakanaka nzira. Ndine chokwadi chekuti ndichazviita vhiki rino uye ndichakuudza.
Mhoro Elena, ndagadzira vise gaspacho uye izvi zvakanaka kwazvo, 1 madomasi, 1 green pepper, 1 hanyanisi, hafu gariki, 800 magiramu e melom, 4 zvimedu zvechingwa, 2 zvidimbu zve ham, 16 prawns, 50 gramu maorivhi , 20 gramu vhiniga, Pellisco yemunyu. Isu tinogadzira visei kuita zvidimbu zvisina mhodzi uye pasina ganda, wedzera hafu yegariki, mhiripiri yakasvibirira, madomasi, chives, zvese zvidimbu zvidiki uye wopwanya zvese mushe mushure mekugadzirwa kwechingwa. uye ikadzvanywa zvishoma, iyo prawns inobikwa kwemaminetsi maviri ine munyu mushoma, iyo nyama inogurwa kuita zvidimbu zvidiki uye inogadzirwa pamusoro peiyo gaspacho nemapuru akabikwa. vagadzirira kudya nyowani. vari…
Mhoro Mari Carmen, maita basa zvikuru pamabikirwo. Ini ndichaita iyi gazpacho mazuva ano nekuti inofanirwa kuve inonaka. Kana ndadaro, ndinokuudza sei. Nenzira, ndinobva kuCantabria. Shuwiro yakanakisa.
Mhoroi vasikana, maita basa neresipi iyi, nezuro ndakaigadzira uye iyo gazpacho yakabuda inonaka, ini handina kana imwe yakasara mufiriji, ikozvino sezvo mamiriro ekunze akanaka ari kuuya ndinoida uye kunyanya nekuti ine hutano. Ndinoda kukukorokotedzai neiyi blog inoshamisa kuti ini naamai vangu, avo vakazvikurudzira, takaita mabikirwo mazhinji, ndeipi iri nani, rimwe zuva shamwari dzese dzaizodya masikati pamwe chete kumba, ndakagadzira keke re 3 machokoreti uye ivo vese munhu akaakuda, kutaura kuti ivo vakatombozvidzokorora.
Ndatenda zvikuru nekugovana mapeche ako, kwaziso.
Ndiri kufara kwazvo, Stefi!. Isu tinofara kwazvo kuti munofarira mabikirwo edu. Ndatenda zvikuru nekutiona! Shuwiro yakanakisa.
Makorokoto pane iyo gazpacho !!
Zvakanakisa ... ndakazviita nezuro pakudya uye mmmmm !!! Asi inotevera nguva ini ndichaisa yakawanda cucumber, nekuti isu tinoifarira yakawanda uye yanga isinga nyatso kuoneka. Ahh neni takagadzirira iyo vhezheni ine yakasikwa yakadzvanywa madomasi kubva muhari mmmmm, inopa zvishoma zvishoma zvinwiwa.
Ndiri kufara kwazvo kuti wakazvifarira, Lidia! Shuwiro yakanakisa.
Ini ndango gadzira iyi nzira uye inonaka kwazvo, asi mhosho yandakawana ndeyekuti ndakave nekugumburwa kwakawanda uye pandakazviita neruoko handina kuzviona, handizive kana iko kukanganisa kuri iko kwechokwadi ini kuisa chando pairi, ini ndakasvetuka nhanho uye izvo zvinobatsira iyo kupwanya zvirinani.
Ndinovimba inotevera. Kana ndichinge ndangozviita, ndinobva ndave nani kubva izvozvi ndinonzwa sekunge ndine kupisa kwazvinoita.
Kutsvoda kukuru kwedu tiri vaviri uye kuenderera ichi chakanaka
Pindura ku violet
Mhoro Violeta, patinokanda muchando, zvese zvinotswanywa nespeed 10 uye ndosaka pasina kana chigumbuso chinosara. Nekusvetuka iyi nhanho hauna kuibvarura. Inotevera nguva zviite sekuuya kwazvinoita muresipi, iwe uchaona kuti zvinonaka sei! Kutsvoda.
Mhoro! ndatenda pane zvese zvaunoita, mubvunzo kubva kune rookie ... unosvuura matomatisi usati waaisa? bsa
Mhoro Elena, ndinoita vhudzi ravo, asi hazvidiwe. Shuwiro yakanakisa.
Kutanga, makorokoto pane yako blog. Ini ndatoita kare akati wandei mabudiro uye kubudirira. Naiyo gazpacho ndanga ndaita dambudziko nekuti panguva yemaminetsi maviri pajubane 2 yakawanda gazpacho yabuda kwese kwese, kunyanya nekuda kwekubatana pakati pechivharo nerabha. Iyo yakawanda mvura zvekuti haina kupwanywa zvakafanana pese pese uye ini ndaifanirwa kuipfuudza kechipiri nehafu yegazpacho. Chokwadi ndeye 10 kg yemadomasi? Ndotenda zvikuru.
Hi Valerie, hongu iyo kg yemadomasi uye kana ikabuda kuburikidza nerabha imhaka yekuti yakatopihwa imwe yacho uye unofanira kuichinja. Zvakaitika kwandiriwo. Kana zviri zvidimbu zvasara, maminetsi maviri anokwana uye zvese zvakapwanyika zvachose. Kwaziso uye ndinofara iwe unofarira yedu blog.
Maria Angeles akadaro
Mhoroi, handina kunyora chero chinhu kwenguva yakareba asi musafunge zvinoreva kuti hapana chandinoita nekuti mabikirwo enyu anonaka. Zvakanaka, iyo gazapacho yakanakira iniwo asi ini ndine dambudziko nderekuti zvese zvakaputirwa pamativi echivharo uye ndinofanira kubata chivharo nekuti chinoedza kuvhura uye kuita kukanganisa saka handizive zvinoitika nekuti Ini ndinowedzera iwo chaiwo, handizive kana muvharo une chakakanganisa kana chimwe chinhu chandisingazive chekuita, unogona kundiudza kuti sei izvi zvichiitika, maita basa kwazvo, ndezvekuti ini ndakaisa zvese zvakarasika
Pindura Mª Angeles
Mhoro Mª. Angeles, ini ndinofunga kuti rabha yatosununguka uye haina kujairika kukanganisa. Ini ndinogadzira gazpacho vhiki rega rega uye haina chikanganiso uye muvharo unoramba wakasimba. Kana mvura ichibuda muchivharo, unofanirwa kuchinja rabha. Bata neako aripo uye muudze iye. Shuwiro yakanakisa.
Ndine urombo, seAndalusian ndinofanira kutaura kuti ichi hachina kufanana neakanaka Andalusian gazpacho. Chando chinosara, chasara nyanya yemumagaba, chisina chingwa, uye zvakawanda zvine rupo nemafuta negariki.
Hi Pedroto, ndakaedza akawanda akasiyana magazpachos. Ambuya vemurume wangu vanoita Extremadura gazpacho iyo inonaka. Chinhu chakanaka nezve mabikirwo ndechekuti isu tinogona kuagadzirisa iwo kumatiro edu. Ini handidi gazpachos nechingwa ndosaka ndichizviita nenzira iyoyo, zvisinei nekuti chekutanga chinoita. Shuwiro yakanakisa.
Vakuru vasikana !!!! Ndangozvigadzira izvozvi kuti zvidye uye kuwedzera pakuve nyowani zvine manakiro uye magadzirirwo …….
Ndiri kufara kwazvo kuti ndinokuda, Lourdes!. Shuwiro yakanakisa.
Ndatenda kwazvo neiyi gazpacho !! zvakanaka izvo!! Tinoda mamwe mvura saka mvura yakawanda uye hapana chingwa. kunaka kwazvinoita mumazuva ano ekupisa kwakanyanya. Kutsvoda kwakawanda
Zvakanaka, iwe waita zvakanaka kwazvo, iwe wakachinjisa icho kune zvaunofarira zvinoshamisa! Ndine chokwadi kuti zvakanaka nenzira iyoyo futi.
Yakabuda yakanaka, ini handina kuwedzera chando kana chingwa, asi ndakaiisa muhari mufiriji ... uye yakapindwa muropa! Nenzira, ndakazviita nematomatisi akapwanyika nekuti ini ndaisaziva kana madomasi chaiwo aifanira kugurwa uye mbeu dzabviswa ... uchandiudza.
Kwaziso uye makorokoto eaya mapapiro anogara achibuda zvakanaka!
Ndatenda nekutaura kwako, Cristina. Unogona kuisa madomasi ese, akanyatsogezwa, nekuti iwo anopwanya chaizvo.
Mhoro. Ndakanga ndagadzira iyo gazpacho kanoverengeka ndichitevera mamwe mabikirwo uye haina kundikodzera. Nhasi ndazviita neyako uye zvanga zvakanaka. Ndokunge ndisina kuwedzera cucumber nekuti haina kundikodzera. Uye ini ndakatsiva mhiripiri yakasvibirira, iyo yandakanga ndisina, nepepuru tsvuku. Ndakati fantastic.
Yakave zvakare yakatsvuka, kwete orenji.
Kutenda neresipi uye newebhu zvese, zvakanaka kwazvo.
Ichokwadi ndechekuti neThermomix inogadzira mapapiro senge aya ari nyore uye anogara achibuda zvakanaka. Makomendi senge ako anotikurudzira kuti tirambe tichigadzira nekutsikisa mapepeki, maita basa kwazvo!
ndiyo oskua !!!
Great Jan! Ichokwadi ndechekuti isu tinopa iyo yakasarudzika nzira uye, chokwadika, kuti yega yega inochinjisa iyo kune zvavanofarira. Semuenzaniso, ini ndatoita zvigadzirwa nemeso zvichienderana nezvandinofanira kushandisa. Kutenda nekutinyorera!
Nuria Ruano Bejarano akadaro
yakanaka kwazvo gazpacho
Pindura Nuria Ruano Bejarano
akapfuma kwazvo. Ichokwadi ndechekuti ini ndinofanira kutaura kuti ini uye iyo thermomix hatifambidzane zvakanaka, ini ndanga ndiine mapapiro asina kusimba, asi iyi gazpacho yanga ichinaka!
Antonia Ruiz akadaro
Iyo blog yakanaka ini ndinoita akawanda mabikirwo kubva pano .. ndatenda
Pindura Antonia ruiz
Kutenda iwe Antonia nekutitevera uye neshoko rako. Kumbundira 🙂
Mhoroi, ndatenda maresipi. Ini ndisingashiviriri mhiripiri, nei mumwe muto ndaigona kuitsiva?
Uye nei usinga gadzire salmorejo iyo zvakare ine yakanaka yemadomasi asi isina mhiripiri?
Zucchini lasagna nehowa uye Aurora muto
Super creamy mbudzi cheese keke